အကောင်းဆုံး Alpha Lipoic Acid (ALA) ထုတ်လုပ်သူ - Cofttek
အာလဖ Lipoic အက်ဆစ် (ALA)
Cofttek သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံး Alpha Lipoic Acid (ALA) အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင် ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ်လစဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ရှိသည်။
အာလဖ Lipoic အက်ဆစ် (ALA) (1077-28-7) Specifications
အမည်: အာလဖ Lipoic အက်ဆစ် (ALA)
မော်လီကျူးအလေးချိန်: 206.33 g / mol
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 60 –62 ° C (140-144 ° F; 333-335 K)
ဓာတုအမည်: (R) -5- (1,2-Dithiolan-3-yl) pentanoic အက်ဆစ်;
α-Lipoic အက်ဆစ်; အာလဖ lipoic acid; Thioctic acid; 6,8-Dithiooctanoic အက်ဆစ်
နာမ်: (±) -α-Lipoic acid, (±) -1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-Dithiooctanoic acid, DL -α-Lipoic acid, DL -6,8-Thioctic acid, Lip (S2) )
InChI Key ကို: AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
ဘဝတစ်ဝက်: နှုတ်ဖြင့် ALA အုပ်ချုပ်မှု၏တစ်ဝက်သည်မိနစ် ၃၀ မျှသာဖြစ်သည်
ပျော်ဝင်: ရေတွင်အနည်းငယ်အနည်းငယ်ပျော်ဝင်နိုင်သည် (0.24 g / L); အီသနော 50 မီလီဂရမ် / mL တွင်ပျော်ဝင်
လျှောက်လွှာ: Alpha-lipoic အက်ဆစ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုဖြိုခွဲရန်နှင့်အခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများအတွက်စွမ်းအင်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ Alpha-lipoic acid သည် antioxidant အဖြစ်အလုပ်လုပ်ပုံရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ပျက်စီးမှုသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာအခြေအနေများအောက်တွင် ဦး နှောက်ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်။
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အဝါရောင်အပ်ကဲ့သို့သော crystals
အာလဖ Lipoic အက်ဆစ် (ALA) (1077-28-7) NMR Spectrum
အာလဖ Lipoic အက်ဆစ် (ALA) (1077-28-7)?
Alpha-lipoic acid သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်တိုင်းတွင်သဘာဝအလျောက်တွေ့ရှိရသောဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကအခန်းကဏ္bloodမှာသကြားဓာတ် (ဂလူးကို့စ်) ကိုစွမ်းအင်အဖြစ်အောက်စီဂျင်ဖြင့်ပြောင်းလဲစေခြင်းဖြစ်သည်။ Alpha-lipoic acid ကိုလည်း antioxidant ဟုခေါ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် free radicals ဟုခေါ်သောအန္တရာယ်ရှိသောဒြပ်ပေါင်းများကိုမျိုးရိုးဗီဇအဆင့်တွင်ဆဲလ်များကိုပျက်စီးစေနိုင်ကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။
alpha-lipoic acid ကိုထူးခြားစေတာကရေနဲ့အဆီနှစ်မျိုးလုံးတွင်ပျော်ဝင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်စွမ်းအင်ကိုချက်ချင်းဖြန့်ဝေနိုင်သည်သို့မဟုတ်သိုလှောင်ရုံကိုနောင်အသုံးပြုရန်သိုလှောင်နိုင်သည်။
Alpha-lipoic အက်ဆစ်သည်“ အသုံးပြုသော” antioxidant များ၊ ဗီတာမင်စီ၊ ဗီတာမင်အီးနှင့် glutathione အဖြစ်လူသိများသောအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဒြပ်ပေါင်းများကိုလည်းပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၁ ဤဓါတ်တိုးမှုများသည်လွတ်လပ်သောအစွန်းရောက်မှုကိုပျက်ပြားစေသည့်အခါ၎င်းတို့သည်လွတ်လပ်သောအစွန်းရောက်များအဖြစ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေသည်။ Alpha-lipoic acid သည်ပိုလျှံသောအီလက်ထရွန်များကိုစုပ်ယူပြီးကျောဘက်သို့၎င်းတို့တည်ငြိမ်သောပုံစံသို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုပြန်လည်ထူထောင်ပေးသည်။
alpha-lipoic acid ကိုတစ်ခါတစ်ရံဖြည့်စွက်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ အချို့သောဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသည်အဆီလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ ကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သွေးဂလူးကို့စထိန်းချုပ်မှုတို့ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးဤပြောဆိုချက်အချို့သက်သေအထောက်အထားများကြီးထွားလာသည်။
Alpha Lipoic Acid (ALA) (1077-28-7) အကျိုးကျေးဇူးများ
Alpha-lipoic အက်ဆစ်သည်သကြားဓာတ်ကိုဇီဝြဖစ်ပျက်စေသည့်အရှိန်ကိုတိုးမြှင့်ပေးခြင်းဖြင့်ဂလူးကို့စ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုကြာမြင့်စွာကတည်းကပင်ယူဆထားကြသည်။ ၎င်းသည်ဆီးချိုရောဂါကုသမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောမြင့်မားသောသွေးဂလူးကို့စ်အဆင့်များဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာပြသည့်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဇီဝဖြစ်စဉ်မမှန်မှုများ (အချို့တွင်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါရှိသူများ၊ အခြားသူများမှဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာရောဂါများရှိသူများ) ကိုကျပန်းထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှု ၂၀ ကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် meta-analysis သည် lipoic acid ဖြည့်စွက်အစာရှောင်ခြင်းသွေးထဲရှိဂလူးကို့စ်၊ အင်ဆူလင်အာရုံစူးစိုက်မှု၊ A2018C အဆင့်ဆင့်။
Neuropathy သည်နာကျင်မှု၊ ထုံထိုင်းခြင်းနှင့်အာရုံကြောပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပုံမှန်မဟုတ်သောခံစားမှုများကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ မကြာခဏဆိုသလို၊ ပျက်စီးခြင်းသည်နဗ်ကြောများ၌နာတာရှည်ရောဂါများဖြစ်သောဆီးချိုရောဂါ၊ လီမင်ရောဂါ၊ ရေယုံများ၊ သိုင်းရွိုက်ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းနှင့်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီရောဂါများကြောင့်ဖြစ်ရသည်။
အချို့သောသူများက alpha-lipoic acid သည်ကြီးမားသောဆေးပမာဏများ၌ပေးထားပြီး၎င်းသည်အလွန်အားကောင်းသော antioxidant လုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့်ဤစိတ်ဖိစီးမှုကိုတန်ပြန်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဆီးချိုနှင့်ဆိုင်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများရှိသူများသည်ဤရောဂါ၏သက်ရောက်မှုကိုအဆင့်မြင့်ဆီးချိုရောဂါရှိသူများတွင်တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည်။
၃ ပတ်အတွင်းပေးသော alpha-lipoic acid ၏နေ့စဉ် ၆၀၀ မီလီဂရမ်သွေးကြောသွင်းဆေးသည်“ neuropathic နာကျင်မှုသိသိသာသာနှင့်လက်တွေ့ကျသောသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချပေးသည်။
ယခင်ဆီးချိုရောဂါလေ့လာမှုများနည်းတူပါးစပ် alpha-lipoic acid ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ထိရောက်မှုနည်းသည်သို့မဟုတ်လုံးဝအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပါ။
Alpha-lipoic acid ရဲ့ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုကိုတိုးစေပြီးကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေတဲ့စွမ်းရည်ကို gurus နှင့် supplements ထုတ်လုပ်သူများကချဲ့ကားပြောဆိုခဲ့သည်။ ထိုသို့ပြောကြားခြင်းအားဖြင့် alpha-lipoic အက်ဆစ်သည်ကိုယ်အလေးချိန်ရှိသော်လည်းအလေးချိန်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည်ဟုသက်သေအထောက်အထားကြီးထွားလာသည်။
ယေးလ်တက္ကသိုလ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုအရ alpha-lipoic acid ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်နေ့စဉ်မှ ၃၀၀ မှ ၁၈၀၀ မီလီဂရမ်မှရရှိသောပမာဏသည်ရလဒ်များအရအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပျမ်းမျှကိုယ်အလေးချိန် ၂.၈ ပေါင်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
alpha-lipoic ဖြည့်စွက်ဆေးနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ပမာဏအကြားဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ထို့အပြင်ကုသမှုကြာချိန်သည်လူတစ် ဦး ၏ကိုယ်အလေးချိန်ညွှန်းကိန်း (BMI) ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သော်လည်းလူတစ် ဦး ၏အမှန်တကယ်အလေးချိန်ကိုမထိခိုက်စေပါ။
ဆိုလိုတာက alpha-lipoic acid နဲ့ကိုယ်အလေးချိန်နည်းနည်းပဲကျန်တော့တယ်။ အဆီကတဖြည်းဖြည်းပိန်လာပြီးကြွက်သားတွေအစားထိုးလာလေလေ၊
Alpha-lipoic acid သည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကသွေးအတွင်းရှိ lipid (အဆီ) ဖွဲ့စည်းမှုကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ကျန်းမာရေးကိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ ၎င်းတွင် "ကောင်းသော" မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ lipoprotein (HDL) လက်စထရောကိုပိုမိုဆိုးရွားစေပြီး၊ မကောင်းသောအနိမ့်သိပ်သည်းဆ lipoprotein (LDL) လက်စထရောနှင့် triglycerides တို့ကိုလျှော့ချပေးသည်။ မကြာသေးမီကပြုလုပ်သောသုတေသနများအရဤသည်မှာမဖြစ်နိုင်ပါ။
ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်လေ့လာမှုအရအရွယ်ရောက်သူ ၁၈၀ သည်ရက်သတ္တပတ် ၂၀ အကြာတွင်ရလဒ်များအရအိပ်ယာထက် ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းပိုများသော alpha-lipoic အက်ဆစ်မှ ၁,၂၀၀ မှ ၁၈၀၀ မီလီဂရမ်ရရှိခဲ့သော်လည်းစုစုပေါင်းလက်စထရော၊ LDL, HDL သို့မဟုတ် triglycerides တို့တွင်တိုးတက်မှုမရှိပါ။
တကယ်တော့, alpha-lipoic အက်ဆစ်ပိုမိုမြင့်မားဆေးများလေ့လာမှုသင်တန်းသားများအတွက်စုစုပေါင်းလက်စထရောနှင့် LDL အတွက်တိုးမှအပ်နှင်း။
အလှကုန်ထုတ်လုပ်သူများသည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များသည်“ anti-aging” alpha-lipoic acid ၏ဂုဏ်သတ္တိများမှအကျိုးရှိသည်ဟုကြွားဝါလေ့ရှိသည်။ သုတေသနပြုချက်အရဤပြောဆိုမှုများအပေါ်အချို့သောယုံကြည်မှုများရှိနိုင်သည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဆောင်းပါးက၎င်းသည်အားကောင်းသော antioxidant ဖြစ်ပြီးဓါတ်ရောင်ခြည်ပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်သည့်အတွက်လေ့လာမှုပြုသည်ကိုမှတ်သားသည်။
အာလဖ Lipoic အက်ဆစ် (ALA) (1077-28-7) အသုံးပြုမှု?
Alpha-lipoic acid သို့မဟုတ် ALA သည်သဘာဝတွင်တွေ့ရှိရသောဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကဲ့သို့သောဆယ်လူလာအဆင့်တွင်အရေးပါသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလုပ်ဆောင်သည်။ သင်ကျန်းမာနေသရွေ့ကိုယ်ခန္ဓာသည်၎င်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လိုအပ်သော ALA အားလုံးကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ထိုအချက်များရှိနေသော်လည်း ALA ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုမကြာသေးမီကအသုံးပြုရန်စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ALA ကိုထောက်ခံသူများကဆီးချိုရောဂါနှင့်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီကဲ့သို့သောအခြေအနေများကိုကုသရာတွင်အကျိုးရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှအဝလွန်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်သည်အထိပြောဆိုကြသည်။
အာလဖ Lipoic အက်ဆစ် (ALA) (1077-28-7) ဆေးတခါသောက်
အန္တရာယ်ကင်းသည်ဟုသတ်မှတ်သော်လည်းသင့်လျော်သော alpha-lipoic acid ကိုအသုံးပြုရန်လမ်းညွှန်ချက်မရှိပါ။ ပါးစပ်ဖြည့်စွက်ဆေးအများစုကို ၁၀၀ မှ ၆၀၀ မီလီဂရမ်အထိဖော်စပ်ထားသည်။ လက်ရှိသက်သေအထောက်အထားများအရအများဆုံးနေ့စဉ်ဆေးပမာဏသည် ၁၈၀၀ မီလီဂရမ်အထိလူကြီးများအတွက်လုံခြုံသည်ဟုယူဆရသည်။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၊ အရွယ် မှစ၍ အသည်းလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ကျောက်ကပ်လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးသည်သင့်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေနိုင်သည်။ အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအနေဖြင့်သတိဖြင့်ဘေးချင်းယှဉ်။ မှားယွင်းဆေးသောက်ပါ။
Alpha lipoic acid ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုအွန်လိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေးအစားအစာဆိုင်များနှင့်ဆေးဆိုင်များတွင်တွေ့နိုင်သည်။ အမြင့်ဆုံးစုပ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ဗိုက်ကိုအစာအိမ်ထဲထည့်သင့်ပါတယ်။
Alpha-lipoic အက်ဆစ်အမှုန့် ရောင်းမည်(အမြောက်အများရှိ Alpha-lipoic Acid အမှုန့်ကိုအဘယ်မှာဝယ်ယူရမည်) ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာပရော်ဖက်ရှင်နယ် Alpha-lipoic Acid အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းများကိုအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းဖြင့်တင်ပို့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ် ၀ န်းစားသုံးမှုအတွက်လုံခြုံမှုရှိစေရန်တိကျခိုင်မာသော၊ လွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်သည်။
Haenen, GRMM; Bast, တစ် ဦး က (1991) ။ "lipoic အက်ဆစ်အားဖြင့် hypochlorous အက်ဆစ်၏နစ်မြုပ်" ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျးဆေးဝါးဗေဒ။ 42 (11): 2244-6 ။ Doi: 10.1016 / 0006-2952 (91) 90363-A ။ PMID 1659823 ။
Biewenga, မိသားစုဆရာဝန်; Haenen, GR; Bast, တစ် ဦး က (စက်တင်ဘာလ 1997) ။ "ဟုအဆိုပါ antioxidant lipoic အက်ဆစ်၏ဆေးဝါးဗေဒ" ။ အထွေထွေဆေးဝါးဗေဒ။ 29 (3): 315-31 ။ Doi: 10.1016 / S0306-3623 (96) 00474-0 ။ PMID 9378235
Schupke, H ကို; Hempel, R ကို; ပေတရု, G; Hermann, R; et al ။ (ဇွန်လ 2001) ။ "alpha-lipoic acid အသစ်ဇီဝဖြစ်စဉ်လမ်းကြောင်း" ။ မူးယစ်ဆေးဝါးဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်း။ 29 (6): 855-62 ။ PMID 11353754 ။
Acker, DS; ဝိန်း, WJ (1957) "Optic active and radioactive α-lipoic acids" ။ အမေရိကန်ဓာတုလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ဂျာနယ်။ 79 (24): 6483-6487 ။ Doi: 10.1021 / ja01581a033 ။
Hornberger, CS; Heitmiller, RF; Gunsalus, IC; Schnakenberg, GHF; et al ။ (1952) ။ "lipoic အက်ဆစ်၏ဒြပ်ပြင်ဆင်မှု" ။ အမေရိကန်ဓာတုလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ဂျာနယ်။ 74 (9): 2382. Doi: 10.1021 / ja01129a511 ။
NR အမှုန့် (23111-00-4)